Isku-aadka Semi-finalka Tartamada Yurub oo La Sameeyay
Xidigii hore ee AC Milan iyo Xulka Ukraine hadana ah safiirka finalka koobka UEFA Champion League ee xiriirka Yurub Andriy Shevchenko oo kor u haya magaca Real Madrid CF inti lagu guda jiray sameynta isku aadka Semi-finalka ee magaalada Nyon.
Waxaa maanta magaalada Nyon ee dalka Switzerlan lagu soo gaba gabeeyay isku aadka wareega semi-finalka tartamada Uefa Champions League iyo Europa League oo ah kuwa ugu xiisaha badan dunida kubadda cakta xilligaan.
Tartanka Champions League, kooxda difaacaneysay horyaalnimada labadi sano ee lasoo dhaafay ee Real Madird ee dalka Spain ayaa ku beegantay Bayern Munich oo Jarmal ah.
Lugta koowaad ayaa waxay ka dhici doontaa garoonka Barnbue ee kooxda Real Madrid 25-ka bishan Aril, halka lugta labaad ay ka dhici doonto garoonka Alianz Arena ee magaalada Muncih 1-da May.
Bayern ayaa wareegii sideeda soo reebtay kooxda Seville ee dalka Spain, halka Real Madrid ay kasoo adkaatay kooxda Juventus.
Labadan koox ayaa isla wareegaan semi-finalka isaga hor yimid xili ciyaareedki laso dhaafay, waxaana finalki 4-2 ku gaarta real Madrid.
Kooxda oo sannado badan kadib gaarta semi-finalka ee Tartanka horyaalka yurub, ayaa waxay isku dhacayaan kooxda Liverpool oo horay ugu guuleysatay shan jeer koobkani.
Roma waxay si layaab leh uga soo badisay wareegi sideeda kooxdood, kooxda Barcelona oo is aragi hore 4-1 ku badisay, balse lugti labaad ku dhacday ku jabtay magaalada Roma oo ay kala laabatay guuldarro 3-0. Waxay aheyd mid ka ah soo laabashadi ugu yaabka badneyd ee abid ka dhacdo tartanka kooxaha horyaalada Yurub.
Ciyaarta dhex mari doonta Liverpool iyo Roma ayaa sidoo kale ah xusuusineysa taageerayaasha labada dhinac, finalki tartanka Yurub ee sanadki 1984-kii markaas oo ay Liverpool rigoorayaal 4-2 koobka uga qaadatay Roma.
Labadani kooxood ayaa hadda is aragooda koowaad ee wareega semi-finalka tartanka Yurub ka dhici doono magaalada Liverpool ee dalka Ingiriiska 24-ka bishaan April, halka lugta labaad ay isku haleeli doonaan magaalada Roma 2-da bisha May.
Dhinaca kale waxaa maanta la sameeyay isku aadka afarta koox ee isugu soo haray tartanka Yuruba Leaage.
Kooxda Arsenal ee dalka Ingiriiska ayaa waxay ku beegantay kooxda Atletico Madrid ee dalka Spain oo laba jeer horay ugu guuleysatay koobkan.
Kooxda Marseille ee dalka Fracne ayaa iyaduna wajahi doonta kooxda RB Salzburg ee dalka Austria.